9 जापानी खानाको लागि सिफारिश गरीयो! सुशी, काइसेकी, Okonomiyaki ... - Best of Japan
सुकीयाकी, जापान = शटरस्टक
यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापानी खाना र पेय पदार्थहरूको परिचय दिन चाहन्छु। जापानमा उच्च श्रेणीको खाना जस्तै सुशी र वाग्यु ​​गाईको मासु र ओकोनोमियाकी र टकोयकी जस्ता सामूहिक खाना सम्म धेरै धेरै मौलिक खाद्य पदार्थहरू छन्। यस पृष्ठमा, मैले छविहरूका अतिरिक्त विभिन्न भिडियोहरू पोस्ट गरे। म तपाइँ भिडियोहरू हेर्न र नजिकै जापानी खाना महसुस गर्न चाहन्छु। तल सूचीबद्ध खाद्यहरूको बारेमा, म भविष्यमा अझ विस्तृत लेखहरू वृद्धि गर्न जारी राख्नेछु। म सिफारिस गरिएका रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा जानकारी पनि बढाउँछु, त्यसैले कृपया आपत्ति नमान्ने हो भने अवसरमा छोड्नुहोस्।
अनुभवी सुशी शिल्पकारहरू द्वारा बनाइएको सुशी असाधारण स्वादिष्ट = शटरस्टक हो
के तपाईंले सुशी खाएको छ? म जापानी खानामा तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि एक छनौट बिना कुनै झिझक को लागी सुशी छनौट गर्छु। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, कृपया सुशी खानुहोस् व्यवसायी सुशी शिल्पकारहरू द्वारा बनाइएको। ती सुशी कला वस्तुहरूको नजिक छन्। अवश्य पनि कन्वेयर बेल्ट सुशी पनि स्वादिलो ​​हुन्छ। कृपया दुबै परम्परागत सुशी र आधुनिक सुशीको मजा लिनुहोस्!
सुकियाबाशी जीरो: सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारहरू द्वारा बनाइएको "कलाकृति"
जापानी परम्परागत सुशी रेस्टुरेन्टहरूमा सब भन्दा प्रसिद्ध "सुकियाबाशी जीरो" माथिको भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको हो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा पनि जापान आएपछि जापानी प्रधानमन्त्री संग यस रेस्टुरेन्ट मा सुशी रमाईलो। यस रेस्टुरेन्टमा रिजर्भेसन गर्न, तपाईले पहिले होटेल रिजर्भ गर्नु पर्छ र होटेलको दरबारलाई आरक्षण गर्न अनुरोध गर्नु पर्छ।
>> Sukiyabashi Jiro को आधिकारिक साइट यहाँ छ
सुकियाबाशी जीरोको अतिरिक्त, त्यहाँ धेरै स्वादिष्ट सुशी रेस्टुरेन्टहरू छन्। ती मध्ये केही सस्तो र स्वादिष्ट छन्। भविष्यमा म यी रेस्टुरेन्टहरूको परिचय दिनेछु।
कन्वेयर बेल्ट सुशी: स्वादिलो ​​सुशी सस्तो र खुशीको साथ खान्नुहोस्!
यदि तपाईं आफ्नो देशको कन्वेयर बेल्ट सुशीको रेस्टुरेन्टमा जानु भएको छ भने पनि कृपया जापानमा कन्वेयर बेल्ट सुशीको अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
जापानमा कन्वेयर बेल्ट सुशीका धेरै रेस्टुरेन्टहरू कडा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। नतिजा स्वरूप, यी रेस्टुरेन्टहरू ग्राहकहरूको मनोरञ्जनको लागि विभिन्न तरिकाहरूमा विकसित भएका छन्। मेनूहरू झन् झन् आकर्षक हुँदै गइरहेका छन्। केही रेस्टुरेन्टहरूले सुशी अर्डर गर्ने बित्तिकै पुरस्कार दिने एउटा सेवा सुरु गरेको छ।
निम्न भिडियोले कन्वेयर बेल्ट सुशीको विस्तारसँग परिचय गर्दछ।
जापानीहरूले पहिले गाईको मासु खाएनन्। जब १ th औं शताब्दीमा पश्चिमी संस्कृति आयो, जापानीहरूले गोमांस खान शुरू गरे, तर गोमांस विशेष समयमा खाइन्थ्यो। जापानीहरु लाई यो विशेष खाद्य उत्पादन को र अधिक स्वादिष्ट बनाउन लामो डिजाइन गरीएको छ। नतिजाको रूपमा, "वाग्यु" जन्मिएको थियो।
यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, कृपया वाग्यु ​​खाने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो अवस्थामा, कृपया पनि वाकियूलाई जलाउने कुकको अवस्था अवलोकन गर्नुहोस्। तपाईलाई लाग्दछ कि यो पेशागत काम हो!
सुकीयाकी (प्रसिद्ध जापानी गोमांसको भाँडो भोजन) = शटरस्टक
जब १ teen औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पश्चिमबाट गोमांस खाने चलन आयो, जापानीहरूले आफ्नो मनपर्ने भाँडाको थालमा मासु खान थाले। त्यसैले "sukiyaki" जन्म भएको थियो।
टोकियोको असकुसामा सुकीयाकीका थुप्रै प्रसिद्ध रेस्टुरेन्टहरू छन्। यदि तपाईं Asakusa भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं पनि सुकियाकी रमाईलो गर्नुहोस्।
शाबु-शाबू सुकिआकीको साथ लोकप्रिय छ। सामान्यतया, शाबू-शाबूको लागि मासु एकदम पातलो काटिन्छ। अग्रिम भाँडोमा पानी राख्नुहोस्, यसलाई उमाल्नुहोस् र मासु त्यहाँ राख्नुहोस्। किनकि मासु पातलो छ, यदि तपाईंले केही सेकेन्डको लागि भाँडामा राख्नुभयो भने तपाईंले पहिले नै यसलाई खान सक्नुहुनेछ।
शाबू-शाबू १ 1950's० को दशकमा ओसाकामा जन्मेका थिए। शाबू-शाबूलाई एक स्वस्थ पकवान भनिन्छ जुन स्टीक्स र सुकियाकी भन्दा कम फ्याटको साथ छ। कृपया प्रयास गर्नुहोस् र आफैलाई स्वाद लिनुहोस्।
काइसेकी जापानी शैलीको रेस्टुरेन्टमा रायोती भनिन्छ। सुशीको साथसाथ, काइसेकी राम्रो जापानी भोजन हो।
काइसेकीलाई टेबलबाट स्टार्टरबाट फेर्ने सेवा दिइनेछ, फ्रान्सेली उच्च श्रेणीको भाँडा जस्तो। शेफ प्रत्येक डिश अनुसार एक सुन्दर पकवान चयन गर्दछ, र एक कलात्मक व्यवस्था गर्दछ। उसले कसरी चार मौसममा परिवर्तन अनुसार व्यवस्था गर्ने परिवर्तन गर्नेछ। पाहुनाले एउटा थालमा एउटै संसार भेट्टाउँछन्।
माथिको चलचित्रमा प्रस्तुत "किचो" जापानको सब भन्दा उच्च श्रेणीको रेस्टुरेन्ट हो। इमान्दार हुन, म त्यहाँ एक पटक मात्र आएको छु। साधारण जापानी मानिसहरुका लागि परम्परागत Kaiseki एक उच्च र टाढाको अस्तित्व हो।
त्यहाँ जापानीहरु काइसेकी रमाईलो गर्न धेरै अवसर छैन। यद्यपि हामीले कहिलेकाँही केसेकीको रमाइलो पनि गर्नुपर्छ। त्यो हामी कतै यात्रामा जान र र्योकन (जापानी शैलीको होटल) मा खाना खाँदा हो। र्योकनमा, शेफहरूले क्षेत्रका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन् र काइसेकी खाना दिन्छन्। यद्यपि उनीहरू कैस्की जत्तिकै सुन्दर देखिँदैनन् जुन अपस्केल रयोटेइले प्रस्ताव गरेका थिए, ती लोकप्रिय छन् किनकि हामी जमिनको स्वाद लिन सक्दछौं। धेरै जापानीहरु Ryokan मा यस्तो Kaiseki खान अगाडि हेर्दै छन्। यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने तपाईं किन Ryokan मा रहन र Kaiseki खान छैन?
ओकोनोमियाकी भनेको जापान प्रतिनिधित्व गर्ने आम व्यक्तिको खाना हो। विशेष गरी, यो प्राय जसो पश्चिमी जापानमा ओसाका, क्योटो, हीरोशिमा जस्ता खाइन्छ।
Okonomiyaki कसरी बनाउने जमीनीको आधारमा अलि अलि फरक हुन्छ। जे होस्, सामान्य रूपमा, यो निम्न प्रक्रिया द्वारा बनाइएको हो।
१) पिठो, कच्चा अण्डा, पानी, सूप स्टक, एकल बलमा राख्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्
२) बन्दकोटीलाई सानो टुक्रामा काट्नुहोस् र यसलाई बलमा मिलाउनुहोस्
)) फलामको थालमा वा भाँडोको तेलमा पिठो। त्यहाँ माइनस्ड पोर्क बेक गर्नुहोस्
)) कचौरामा राखिएको सबै सामग्री स्टील प्लेट वा भाँडोमा थप्नुहोस्
)) फर्काउनुहोस् र पछाडि पछाडि बेक पनि गर्नुहोस्
)) प्लेस सॉस र मेयोनेज
Okonomiyaki मन्दिर र मन्दिरको अगाडि खाद्य स्ट्यान्डमा बेचिन्छ। ओकोनोमीयाकीको स्वाद ओसाका र हिरोशिमा बीच एकदम फरक छ, त्यसैले कृपया खान र तुलना गर्नुहोस्।
टोकियोको शहरमा, तपाईं पनि "Monjayaki" भनिने सडक फूड खान सक्नुहुन्छ जुन Okonomiyakiसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। मोन्जा बच्चाहरूको खाजाको रूपमा जन्म भएको थियो। रकम Okonomiyaki भन्दा कम छ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, Okonomiyaki क्षेत्र मा निर्भर पर्याप्त भिन्नता छ।
टाकोयाकी, अक्टोपस बलहरू, जापानी खाना, कालो पृष्ठभूमिमा = शटरस्टक
ताकोयाकी गहुँको पीठोबाट बनेको सडकको खाना हो। अक्टोपस फिललेटहरू तिनीहरूमा समावेश छन्। Takoyaki एक समर्पित इस्पात प्लेट मा बनेको छ र एक गोल आकार मा समाप्त भयो। Okonomiyaki जस्तै, यो साधारण खानाको रूपमा व्यापक रूपमा लोकप्रिय छ। खास गरी ओसाका कन्सईमा यो प्रायः खाइन्छ। तलको चलचित्रमा, कसरी टाकोयाकी बनाउने भनेर प्रस्तुत गरियो।
रामेन एक चाउचाउ डिश हो जुन लगभग १०० वर्ष पहिले जन्मिएको थियो। यसको उत्पत्ति चिनियाँ चाउचालको भाँडामा हो। यद्यपि यसले आफ्नै क्रमविकास बनाएको छ। आज, रमेनका विभिन्न प्रकारहरू लोकप्रियताको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
रामेनलाई निम्न चार प्रकारहरूमा विस्तृत रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
१) शोयु रामेन: सूप सोया सस स्वाद हो।
२) शियो रामेन: सूप नुन छ।
)) Miso ramen: सूप मिसो स्वाद हो।
)) टोंकोट्सु रामेन: सूप पोर्कको हड्डीले बनेको हुन्छ।
मुख्य ramen क्षेत्र को आधार मा फरक छ। उदाहरणको लागि, उही होक्काइडोमा पनि मिसो रामेन प्रायः सप्पोरोमा खाइन्छ, तर हाकोडाटेमा धेरै शोयू रामेन्स खाइन्छन्। हाकातामा, टोंकोट्सु रामेन मुख्य हुन्।
थप रूपमा, रामेनको स्वाद स्टोरमा निर्भर गर्दछ। यस कारणले गर्दा, धेरै मानिसहरू स्वादिष्ट रामेनको खोजीमा विभिन्न पसलहरूमा जान्छन्।
शानिओकोहामा, कानागावा प्रान्तमा, "शिन्याकोहामा रामेन संग्रहालय" छ जहाँ तपाइँ देशव्यापी स्वादिष्ट रमेन तुलना गर्न र खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै, त्यहाँ रामेन सडकहरू छन् जसले टोकियो स्टेशन उत्तरी एक्जिट (यासू एक्जिट), क्योटो स्टेशन भवन, र अन्यमा विभिन्न रामेन पसलहरू संकलन गरे। तपाईं जापानमा बस्नुहुँदा, कृपया विभिन्न रामेन खाने प्रयास गर्नुहोस्!
मैले २० वर्ष भन्दा बढी पहिले मलेसियामा भारतका एक परिचितसँग करी खाएको छु। त्यतिखेर म छक्क परें। "यो साधारण करी होइन!" जवाफमा, मेरो परिचयले भने। "तपाई के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो सामान्य करी हो!"
त्यसबेला सम्म मैले कहिले पनि वास्तविक करी खाइन। म सबै समय केवल जापानी शैली को करी खाइरहेको छु।
जापानी करी भारतीय करी भन्दा बिलकुलै फरक छ। यो ब्रिटिश करीमा आधारित छ र जापानमा स्वतन्त्र रूपमा विकसित भएको छ।
जापानी करीको मुख्य विशेषता भनेको चामलमा करी बनाउनु हो। थप रूपमा, हामी यसको माथि पोर्क कटलट राख्न सक्छौं।
हालसालै जापानमा भारतीय स्टाइल रेष्टुरेन्टहरूको संख्या बढेको छ। यद्यपि, अचम्मको कुरा, विदेशबाट आएका पर्यटकहरूमा जापानी स्टाइल करीमा रुचि राख्ने मानिसहरू देखा पर्दैछन्।
यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, कृपया जापानी स्टाइल करी खान पनि प्रयास गर्नुहोस्। मेरो सिफारिश एक करी रेस्टुरा श्रृंखला हो जसलाई "कोकोइची" भनिन्छ। यस रेस्टुरेन्टमा तपाईं विभिन्न करीबाट रोज्न सक्नुहुन्छ। आधिकारिक साइट तल छ।
>> "कोकोची" को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ